How To Be A Blogger: Pullquote ထည့်သွင်းခြင်း
အခွင့်အလမ်းသည် အလုပ်လုပ်ပြီး ဆန္ဒပြုနေသူ အားလုံးထံသို့ အနှေးနှင့် အမြန်ဆိုသလို ရောက်လာပေသည်။
ကျနော်တို့ ပို့စ်တွေ ရေးကြတဲ့အခါမှာ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆို အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို ရေးကြတယ်။ တချို့ဆို ၀တ္ထုတို၊ ဘာသာပြန်၊ ပြည်တွင်းသတင်း စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာလို စာအမျိုးအစားပဲ ရေးရေး ကျနော်တို့ ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိကြသလို စာဖတ်သူဆီ ထည့်သွင်းပေးချင်တဲ့ အတွေးအခေါ်လည်း ပါပါ့မယ်။ ဒါဆို အများစုက အဲဒီ ထူးထူးခြားခြား စာသားလေးတွေကို အရောင်ပြောင်းပြီး တင်ကြတာ များပါတယ်။ ထင်ရှားစေချင်လို့ ထူးခြားစေချင်လို့ပေါ့။ တကယ်လို့ အခု ဒီပို့စ်မှာ မြင်ရသလို ဘေးနားမှာ ဘောင်လေးနဲ့ သက်သက် ထားပြီး ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး သိသာထင်ရှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Pullquote လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲလို သိသာ ထင်ရှားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နောက် နှစ်နည်း ရှိပါသေးတယ်။ Blockquote နဲ့ Opacity Text ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဆက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ဒီမှာ Pullquote ကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
အဆင့် (၁) စတိုင် (CSS) သက်မှတ်ခြင်း
CSS ဆိုတာနဲ့ Style Sheet မှာ ထည့်ရမယ်ဆိုတာ အလိုအလျောက် သိနိုင်ပါတယ်။ မသိသေးသူအတွက် ထပ်ပြောပေးပါ့မယ်။ <b:skin><![CDATA[ နဲ့ ]]></b:skin> ကြားကို Style Sheet လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ Code ကို Style Sheet မှာ ထည့်ပေးပါ။
border:1px solid maroon;
အဆင့် (၂) Pullquote တစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်း
ကျနော် Pullquote လုပ်ချင်တဲ့ စာကို ဒီလိုလေး ရေးပေးရပါမယ်။ စာရိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Post ရိုက်တဲ့ နေရာမှာ ထည့်ရမှာပါ။ ဒါက အခြေခံသာ ရှိတဲ့ လူတွေအတွက် ပြောပေးတာပါ။
ကဲ ... ကျနော် ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ ပြောပြလိုက်ရင် ပိုရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ Create New Post မှာ အောက်က စာတွေ ရိုက်ထည့်ပေးကြည့်ပါ။
Your post that contains way too much undecorated text goes here. The exact placement of the pullquote is up to you.
<span style="color:maroon;font-size:x-small;">Lord Stanley</span>
But, you will want to make sure that you have typed inalong enough post that actually needs some pullquotes to make it more interesting. So I'm just typing here so that you can see about where you might want to put the pullquote. To position the pullquote in the right place is up to you. You may have to fiddle with it and see how it looks. Or, you might want to define your pullquote to beadifferent width. It does need to be prefaced withalot of text and followed by enough text that it looks good. Ours was overlapping without enough text so we are just rambling here.
ဒါဆို အောက်က ပုံစံအတိုင်း ဘလော့ဂ်မှာ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by ပီကေ at 10:33 AM
Labels: Post, Text
Archive (2) Basic (1) Comments (4) Expand Or Collapse (4) Expand/Collapse (4) File Hosting (1) General (10) Image (5) Labels (10) Link (3) Link List (2) Polls (2) Post (22) Print (1) Setting (1) Table of Content (4) Templates (3) Text (9) Title Bar (1) Tools (8) Widgets (19)
How to Blog by ပီကေ is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License.
Based onawork at PIKAY.myanmarblogs.net.
©2006-2012 How To Be A Blogger
Disclaimer: ဤဘလော့ဂ်တွင် တင်ပြထားသော မည်သည့်ပို့စ်ကိုမဆို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကို ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် မလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကားဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိ အလိုအရ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၍ တင်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပြင်ဆင်သည် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဘလော့ဂ်ရေးသူ ပိုင်ရှင်နှင့် မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ဆက်နွယ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။ သို့သော် အကူအညီ တောင်းခံလာပါက တတ်စွမ်းသရွေ့ လိုက်လံဖြေရှင်း ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိစေအပ်ပါသည်။